PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: မုံရွာကြေးနီစီမံကိန်းမရပ်ဖို့ တရုတ်သံရုံးက ပြောပြီ
မုံရွာကြေးနီစီမံကိန်းမရပ်ဖို့ တရုတ်သံရုံးက ပြေ...
လက်ပန်တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း (လုံးဝ) ဖျက်သိမ်...
မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ ကြားမှာ ဖြတ်သန်း လာခဲ့တာပါ ... ဘ...
မုံရွာခရိုင် ၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစြု...
သပိတ်စခန်းများ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခံရ ရုပ်သံသတင်း
ကြေးနီတောင်စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေး ပြည်မြို့မှာလည်း...
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ တိုက်ပွဲဝင် သပိတ်စခန်းများအရေး ဗ...
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းရှေ့က သပိတ်စခန်း မြင်ကွင...
ဖုန်း အင်တာနက် အသုံးပြုခ စရိတ်စက ကြီးမြင့်မှုကြောင...
လက်ပတောင်းတောင်ဒေသ ယနေ့ လက်ရှိအခြေအနေ
အင်တာနက် မသုံးပါနဲ့လို့ မတားဘူး...????? .... ပိုက်...
"ဦးခင်ညွန့်နဲ့ ခဏတဖြုတ် ဆုံတွေ့ခြင်း"
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်က စိန်ခေါ်သံများ ...
၂၀၁၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း အတွေးအခေါ်ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန...
ခရီးစဉ်ကို ချုံ့လိုက်သလို ဖြစ်သွားတဲ့အရှေ့တောင်အာရ...
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရန်အတွက် ဆားလင...
တရုတ် - မြောက်ကိုရီးယား - မြန်မာ သုံးယောက်ပေါင်းေ...
လက်ပန်တောင်းတောင်ကြေးနီ စီမံကိန်းရပ်တန့်ရင် ဆူးလေ...
တိုင်းရင်းသား ကျောင်းသားတွေကို မလှောင်ပါနဲ့ စာနာပေ...
“ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်လို့ အရေးယူခံရမှ နိုင်ငံရေး မဟ...
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန် စီစဉ်
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပါ့စ်ပို့အသစ်ကို ဘာကြောင့် ကန့်ကွက...
"ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ Internet သုံးလို့ရပါပြီ ""Pas...
ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှုများမှာ ပိုမို ပြင်းထန်လာပြီး
ဂျပန် နိပွန် ဖောင်ဒေးရှင်း ကရင် ဒေသခံ များ အတွက် တ...
“အရင်က ကျွန်တော်တို့ မှားခဲ့ပါတယ်”ဟု သမ္မတရုံးဝန်ကြ...
မြောက်ကိုရီးယား မြန်မာကို လက်နက်ပို့တာ ဖမ်းမိခဲ့
တရုပ်သည်... မြန်မာပြည်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်
အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု ရပ်တန့်စေရန် ရည်ရွယ်...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ တနင်္သာရီတိုင်း ဟောပြောပ...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံ၊ ဆန္ဒပြမှု ပြီးဆုံး ။
မြန်မာ့တပ်မတော်ထုတ် လက်နက်ငယ်များ ပုံစံသစ်ဖြင့်ထွက...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဝန်ကြီးချုပ်ယဉ်လတ်အား ရာထူးမှနုတ...
မွတ်စလင်တွေကို ဘန်ကောက်ပို့ စ် အယ်ဒီတာအာဘော်က တွယ်...
ဂျပန် Credit ကဒ်မ်ြနမာ၌ ၂၀၁၃ မှစ၍ သုံးစွဲနိုင်
မြန်မာစစ်တပ် အကြီးအကဲ တစ်ဦးနှင့် နိုင်ငံတကာမီဒီယာ...
ဒီလိုကြီးတောင် လွှတ်တော် တက်တောင်းတယ်ဆိုပါလား
တရုပ်ကို ကြောက်နေရတယ်လို. သမတရုံးဝန်ကြီးက ပြောဆို
SSPP/SSA လှုပ်ရှားနယ်မြေ မြို့နယ်လေးခုအား အစိုးရတပ်...
တိုင်းရင်းသားကျောင်းသားများ မြင်ရတွေ့ရ စိတ်မချမ်းသ...
ညစာစားပွဲတွင် တိုင်းရင်းသားအရေးကို ဒီချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်...
ေ၇ွှတိဂုံဘု၇ားဇောင်းတန်းမှာ ကျွန်တော် ဘား၇တ်အိုဘား...
စစ်ယူနီဖောင်းကြီးဝတ်ဆင်ပြီး ကဲချင်းတိုင်း ကဲနေကြတာ...
မြန်မာ အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးတိုးတက်မှု သုံးသပ်စရာဖြစ်
စစ်ပွဲကြောင့် ပလောင်ပြည်သူအများအပြား ဒုက္ခရောက်နေရသ...
ဘ၀နေညိုချိန်အထိ ချမ်းသာခွင့်မပေးသော အာဏာရှင် နှင့်...
တိုင်းရင်းသား လူငယ်များ မန္တလေးသို့ လမ်းလျှောက်ချီတ...
မြန်မာအသင်းကို အားပေးဖို့ ဘန်ကောက်မှာ လက်မှတ် အလကာ...
လက်ပန်းတောင်းတောင် သပိတ်စခန်း ၄ ခုအထိ တိုးချဲ့ဖွင့...
မြန်မာနိုင်ငံကို ကူညီတာ ပြည်သူရဲ့ အင်အားကို ဖြည့်ေ...
ဒီမိုကရေစီ တကယ်လိုလားရင် ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်မှဖြစ်...
ဖားကန့် ဗျုဟာစခန်းကုန်းသို့ ရိက္ခာခဲယမ်း ထမ်းပို့ ရ...
မြန်မာ့ပညာရေး တိုးတက်ဖို့အတွက် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်မျာ...
အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းများ လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် ခန့်ထ...
သတင်းသမားများ သတင်းသွားယူရင်း ဖမ်းဆီး တရားစွဲခံရ
တပ်သား ၃ ဦး ပြန်မရသဖြင့် မြန်မာဘက်က နယ်စပ်ဂိတ်မျာ...
သမ္မတ အိုဘားမား၏ ရိုဟင်ဂျာ အသုံးအနှုန်း မြန်မာအစိုးရ...
ဇာခန်းဆီးနောက်ကွယ်မှ ဇာတ်လမ်းများ - အပိုင်း (၆)
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဆန္ဒပြပွဲနဲ့ သံဃာေ...
ခြေထောက်များ၌ ကြိုးတုပ်ထားသော ဗျိုင်းဖြူ ၄ ကောင်ချ...
သမ္မတ အိုဘားမား မိန့်ခွန်းကို ဘယ်လို မြင်ကြသလဲ (သူတ...
အမေရိကန်သံအမတ်နဲ့ ဘီဘီစီ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများအား ရပ်ဆိုင်းသင့်ကြောင်း သ...
ငွေအလွဲသုံးစားမှုတွေကို အချိန်တခုပေးပြီး နိုင်ငံတေ...
မပုပ်မသိုး စွန်းလွန်း ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရုပ်ကလာပ် န...
တိုက်ပုံအင်္ကျီဝတ်ပြီး သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်နေသော ...
တိုင်းရင်းသား အရေး ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ နိုင်ငံရေး အရ...
မုံရွာကြေးနီစီမံကိန်းမရပ်ဖို့ တရုတ်သံရုံးက ပြောပြီ
မုံရွာကြေးနီစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းဖို့ လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသ နဲ့ တခြားဒေသတွေမှာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး ရုပ်ဆိုးတဲ့ နှိမ်နင်းမှုများ လက်ပံတောင်းတောင်သပိတ်စခန်းတွေမှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ နောက်တနေ့မှာပဲ ရန်ကုန်မြို့တရုတ်သံရုံးက သူတို့ရဲ့ သဘောထားကို ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။
ကြေးနီစီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်ပါ ဆိုတဲ့ သဘောကို အဲဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့ရမှာပါ။ မြန်မာလို ထုတ်ပြန်ရာမှာလည်း အဲဒီသဘောကို တွေ့ရပါတယ်။
Tel: (951) 221280 221281• Fax: (951) 227019
Remarks on the Monywa Copper Mine Project
Monywa Cooper Mine Project isajoint venture between business communities of China and Myanmar that will bring benefits to both sides.
Issues such as relocation, compensation, environmental protection and profit sharing regarding this project were jointly settled through negotiations by the two sides and meet Myanmar's laws and regulations.
We hope all levels of Myanmar society can createafavorable environment for the project's smooth operation based on respect for laws and regulations of Myanmar.
For further information, please contact Mr. Gao Mingbo, spokesperson of the Embassy at
0943209652 or gaomingbo@gmail.com.
တရုတ်သံရုံးရဲ့ မြန်မာလို ထုတ်ပြန်ချက်က အင်္ဂလိပ်လိုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ မနီးစပ်တဲ့စကားလုံးတချို့ ပါဝင်နေပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားသူများ ဖတ်နိုင်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး တိတိကျကျ ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖုန်း (၉၅၁) ၂၂၁ ၂၈၀၊ ဖက်စ် (၉၅၁) ၂၂၇ ၀၁၉
တရုတ်မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း တခုဖြစ်သော မုံရွာကြေးနီတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်း စီမံချက်သည် နှစ်ဘက်စလုံးအတွက် အကျိုးရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော နေရာရွှေ့ပြောင်းမှု၊ လျော်ကြေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး၊ အကျိုးအမြတ် ခွဲဝေရေး စသည်တို့ကို နှစ်ဘက် ညှိနှိုင်းပြီး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လည်း ကိုက်ညီပါသည်။
စီမံကိန်း အဆင်ပြေစွာ လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာပြည်မှ လူမှုအလွှာအသီးသီးက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ သင့်လျော်သော အခြေအနေတခုကို ဖော်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။
တရုတ်သံရုံး အွန်လိုင်း လိပ်စာ - http://mm.china-embassy.org/eng/
ကြေညာချက်စာမျက်နှာ လိပ်စာ - http://mm.china-embassy.org/eng/sgxw/P020121130031637704213.pdf
သတင်းရင်းမြစ် . ဧရာဝတီ